I-Riverside Retreat - I-Airbnb
Le yiyunithi yesitudiyo eyonwabileyo, ezimeleyo ezimeleyo. Kukumgama wokujula kude noMlambo iMurray.
Le ndlu izimele yelizwe igcwele nje umlinganiswa ngaphandle nangaphandle. Unendawo yabucala enengca eneehektare zegadi esecaleni komlambo ukuze uzulazule.
Ngaphesheya komlambo, iinkomo ziyatya, amadada angakubulisa kwijethi yabucala. Ngokuhlwa jonga iipossum nazo.
Le ndlu izimele yelizwe igcwele nje ubuntu ngaphakathi nangaphandle. Unendawo yabucala enengca eneehektare zegadi esecaleni komlambo ukuze uzulazule.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1
4.85 · Izimvo eziyi-199
IPinjarra inomtsalane wakudala wehlabathi omangalisayo ngayo. Kuninzi okufumanayo kwimbali yayo enemibala. Thatha uhambo olusecaleni komlambo oluqala kufutshane. Kukho iithayile kwindlela yeenyawo kunye namacwecwe apha naphaya abonisa ixesha elidlulileyo.
Ukuhamba ngasemlanjeni kukukhokelela kwiCawe yaseSt Johns Anglican kunye nengcwaba likaVulindlela. Isikolo esidala esikufutshane ngoku sineqela elikhulayo labafundi, kunye nendawo ebonisa imisebenzi ethengiswayo. Ecaleni koku kukho imyuziyam eneefoto zembali.
Ukuqhubeka nokuhamba phantsi kwebhulorho kukuzisa ePicaresque Cantwell Park. Oku kuncediswa ngebhulorho yokujingi, izixhobo zokuzilolonga zabantu abadala kunye nendawo yokudlala yabantwana emangalisayo.
Kwisitrato esikhulu, ungaphoswa ukuba neescones e-Edenvale Tea Rooms ezikubuyisela kwixesha lakudala.
Bendingakuxelela ngeendawo ezintle zokutya, utye ikofu okanye ujonge ubugcisa kodwa uza kuzifumanela into ngokwakho☺
Le ndlu izimele yelizwe igcwele nje umlinganiswa ngaphandle nangaphandle.…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pinjarra